Izimo zesimo sezulu ezi-4 zemvelo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Los Izimo zezulu ukuheha ukunakwa ngokubabazeka kwayo kanye ne- amandla amakhulu okubhubhisa kokubili kubantu nasemvelweni. Kodwa-ke, kukhona uchungechunge lwezinto ezingaziwa kakhulu kubantu abaningi futhi lokho kuba nomphumela ihlukile emhlabeni wonke.
Ngokulandelayo ngizokukhombisa izenzakalo zezulu ezine ezizokwenza uhlala uvule umlomo.
1 Umbani weCatatumbo
2 Imibhoshongo yomusi
3 Isiphepho esikhulu seSupercell
4 Amafu amapharele
Lesi simo senzeka ezweni laseNingizimu Melika kusuka eVenezuela futhi ibonakala ngokulandelana kwe- uchungechunge lwemishudo yombani cishe ngokuqhubekayo. Ukuze into enjalo yenzeke, amafu entuthuko enkulu aqondile adingekayo akhipha ukuphuma kukagesi phakathi Amakhilomitha ama-2 kuye kwayi-10 ukuphakama.
Endaweni yase-Iceland ungabona lesi simangaliso esiyiqiniso semvelo, esenzeka lapho amakholomu amaningi we-steam ezivela emhlabeni obilayo, zikhuphukele emoyeni ezikhiqizayo bobunjwa obubabazekayo futhi lokho kushiya izivakashi imilomo ivulekile ngokoqobo.
Isiphepho esikhulu seSupercell
Lesi siphepho esesabekayo okuthiwa i-supercell, amafomu ezimweni ezingazinzile kakhulu nangomoya cishe isiphepho. Imvamisa kwenzeka emaThafeni Amakhulu ase-USA, ikakhulukazi endaweni ye-texas. Ukubukeka kuyamangalisa kakhulu futhi imvamisa kunakho amandla amakhulu okubhubhisa ngenxa yesikhathi eside.
I-Las amafu wamaparele Bateleke kakhulu ngemibala yabo kepha ngasikhathi sinye bayingozi impela ngoba badaliwe we-nitric acid. Ngakho-ke ziyinto enhle ngempela futhi ebhubhisayo yemvelo, zakhiwa ku-stratosphere emazingeni okushisa aphansi impela phakathi -50 degrees no -80 degrees.
Lezi ziyi I-4 yezimo zezulu okumangalisa kakhulu futhi okumangalisayo okwenzeka emhlabeni wonke. Ngiyethemba ubathandile futhi ujabulele izithombe ezinhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » 4 umbukwane sezulu izenzakalo zemvelo